Sida loo hagaajiyo maqnaanshaha ama aan la isku hagaajin xiriirada iCloud ee macruufka 7.1.2 | Wararka IPhone
Carmen rodriguez | | Wararka IPhone, Casharrada iyo buugaagta
Waxaa dhici karta in markii aad galaysid xiriir kujira arjigaaga Xiriirada iPhone, aysan ka muuqan arjigaaga desktop-ka. Codsiga ay tahay inuu ka dhigo mid iswaafajinaya barnaamijkan, kuwo kale, waa iCloud iyo kadib marka la cusbooneysiiyo macruufka 7.1.2 waxaa jira isticmaaleyaal ma waafajiyo iyaga ama xitaa ka sii xun, xiriirada waa baaba'aan.
Waa inaan taas xasuustaa Hawlgalka iCloud on iPhone ama wixii Mac ah ayaa ku xaddidan xilligan aan ku jirno qalab ku xiran wifi, Haddii aad joojiso inaad ka fikirto inay iska cadahay, haddii kale waxaan ku qaadan doonnaa xog aan xadidneyn kaliya sameynta nuqullo nuqul ah iyo cusbooneysiinta mid ka mid ah codsiyada aan ku soo wada shaqeynay illaa iCloud.
Ayaa sheegay in aan aragno sida loo xaliyo dhibaatada taas ayaa maanta wax naga qabanaysa.
1 Badbaadinta xiriirada cusub ee iCloud
2 Soo hel xiriirrada aan qarsooneyn
Badbaadinta xiriirada cusub ee iCloud
Caadi ahaan qaladkani wuxuu ku dhacaa dadka leh emayllo badan oo lagu qoondeeyay iPhone-ka iyo qiimaha caadiga ah uma hago iswaafajinta adeegga iCloud, laakiin emaylkii ugu dambeeyay ee la qaabeeyey. Aan aragno sida loo sameeyo:
Helitaanka Boostada, xiriirada, kalandarka.
Hoos u dhaadhic liiskaan illaa aad ka hesho qaybta ka hadlaysa xiriirada. Hadda waxaad arki doontaa inay u muuqato sida ikhtiyaarka ugu dambeeya ee qaabeyntan si loo go'aamiyo «Koontada asalka ah«
Hubi waxaad dooratay iCloud
Waa macquul in ikhtiyaarka ah «Koontada asalka ah»Kuuma muuqan doono, waa tan dadka kaliya waxay leeyihiin hal koonto emayl oo la qaabeeyey waana isku mid sida ay iyagu leeyihiin oo kale Aqoonsiga Apple, sidaa darteed looma baahna in wax kale la sameeyo, qaladku kama yimaado tallaabadan.
Soo hel xiriirrada aan qarsooneyn
Waxaan ka hortagi karnaa waayitaanka xiriirada iyadoo la adeegsanayo iswaafajin aan horay u sharraxay, laakiin ka waran xiriirada aan shaqeynin? Waxa iyaga ku dhaca ayaa ah in la sii wado oo lagu dhex daro dhammaan aaladaha waa inaad ka shaqeysaa meel hoose. Aan aragno sida loo ogaado waxa ay yihiin:
Ku bilow arjiga phone
Taabo Kooxaha (ilaa midigta) Dhammaan xiriirada waxay soo muuqan doonaan iyadoo loo eegayo koontada emaylka asalka ah iyadoo kuxiran kuwa aad qaybisay.
Hubinta gudaha qaybta iCloud «Dhamaan iCloud«
Guji Ok (midigta sare)
Hadda a liiska xiriirada ee aan la synced ama ka maqan qalab kale.
Halkan laga bilaabo adiga ayay ku xiran tahay go'aankaaga waxa aad ku samaynayso, masax iyaga maxaa yeelay iyagu muhiim ma aha ama dib ugu dar. Waa maxay aad muhiim u ah waa in markii jeegga la sameeyo iyo haddii aad rabto inaad si fudud uga baxdo ama aad ku darto xiriirada la ogaaday markale gujiDhamaan iCloud« kahor intaanad kabixin xulashada kooxdan.
Waxaan rajeynayaa inay waxtar laheyd oo haddii aad shaki qabto, faallo !!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo hagaajiyo maqnaanshaha ama aan la isku hagaajin xiriirada iCloud ee ku jira macruufka 7.1.2
Iyo ka warran kuwa loogu talagalay "Xiriirada" aynaan helin tabka "koontada aasaasiga ah" (kuwa kale ayaa sameeya) iyo arjiga "taleefanka" waxba kama helno kooxaha midigta sare jooga?
Waxay ahayd inaan fiiriyo labo jeer haddii aan 7.1.2 lahaa maxaa yeelay waxay umuuqataa inaad kahadlayso taleefan kale ...
Jawaab Osiris Armas Medina
Fadlan iska indha maqaalkan. Waxyaalaha badhkood si liidata ayaa loo sharaxay waxaadna lumin kartaa dhammaan dadka aad la xiriirto haddii aad samayso waxa ay ku qoran tahay.
Ku soo jawaab Maica
Mahadsanid Maica, sidoo kale xoogaa waan qasanaa. Waxaan hayaa in kabadan hal emayl oo lagu hagaajiyay iPhone-ka ikhtiyaarkaasina aniga ima shaqeynayo ...
MA SOO XIDHAYO XUSUUS, SAWIRO iyo JADWALKII AAN SAMEEYO
Jawaab ku samee gladyslozano3@icloud.com
Jawaab Ricardo Leon
Xagee ka helaa taleefanka arjiga, kooxda, iwm.
Aad baad u mahadsantahay !!! Qofna igama xallin karin xiriirada iga maqan mahadnaqidna tusahan waan xalliyay.
Aad baad u mahadsan tahay .. heer sare .. xiriiriyayaashaydu mar labaad ayey soo muuqdeen, 3! Saameyntu waxay ahayd dhibaato isku-dheelitirnaan la xiriirta iCloud .. runti waxaan ku arkay dhammaantood whatsapp-ka oo aan jeclayn taas oo ku jirta barnaamijka xiriirka taleefanka .. gcs badan baa markale !! Sharaxaadaadu aad ayey u cadahay !!
Way igu dhacdaa aniga markii aan gacanta ku daro xiriir aan ka muuqan liiska xiriirka, kaliya liiska WhatsApp (haddii uu mid leeyahay). Laakiin markaan garaaco lambarka xiriirka oo aan muuqan, markaan wacayo ayaan magaca helayaa. Ma ogtahay sababta ay taasi u dhacdo? Xagee lagu keydiyaa
Jawaab Alan Bredice
Runtii waad mahadsantahay! Horaan waan u xaliyay aad ayaad u mahadsantahay
Waad salaaman tihiin dhamaantiin. Xiriirayaashayda waxay kujiraan xisaabteyda icloud-ka ee kumbuyuutarkeyga, laakiin kama muuqato iphone-kayga. Waxaan horeyba u sameeyay nidaamka kooxda dhammaan xisaabaadka iyo waxba. Qof baa i caawin kara.
Jawaab si Mario Abel Urbina
Subax wanaagsan, markaan mobilka shido maanta, waxaa ii imanaya wasakhda, sidii iyadoo aanan waxba qorin tan iyo waagaas oo aan sii waday isticmaalkeeda ilaa shalay.
Maxaa dhici karay?
Waad ku mahadsantahay caawimada! Qaar ka mid ah xiriirada ma jirin waddo ay ku soo muuqdaan, waana ku mahadsan tahay tan awalba waa la xalliyey. Mahad badan!!
Jawaab Juanje Peralta
post weyn waad i caawisay waxbadan waad fiicantahay
Dhibaatadaydu waxay tahay inaan keydiyo xiriir taleefankayga iphone-ka, ka dib waan raadsadaa mana heli karo. Kadib waxaan aadaa Wsap maxaa yeelay waan ogahay inaan halkaas ku hadlay, waan tafatiriyaa xiriiriyaha, nambarka nuskhad ayaan aadaa oo waxaan aadaa meesha wicitaanka, halkaas markaan ku dhajiyo CELKA Wuu Aqoonsanayaa Xiriirka !! oo magacaaga iyo wax walboo dhig !! laakiin haddii dhowr maalmood kadib duulimaadku raadsado, MA MUUQATO !!! waana inaan ku celiyo tifaftirka, koobiga iyo dhejiska. EYE Waan saxaa oo waan nuquliyaa si aanan ugu wicin wsap laakiin khadka taleefanka ayaan ugu wacaa maxaa yeelay tayada wicitaanadu way ka fiican tahay, qorshahayguna waa mid aan xad lahayn.
Jawaab LUIS CHAVARRO
Dhibaatadaydu waxay tahay inaan keydiyo xiriir taleefankayga iphone-ka, ka dib waan raadsadaa mana heli karo. Kadib waxaan aadaa Wsap maxaa yeelay waan ogahay inaan halkaas ku hadlay, waan tafatiriyaa xiriiriyaha, nambarka nuskhad ayaan aadaa oo waxaan aadaa meesha wicitaanka, halkaas markaan ku dhajiyo CELKA Wuu Aqoonsanayaa Xiriirka !! oo magacaaga iyo wax walboo dhig !! laakiin haddii dhowr maalmood kadib duulimaadku raadsado, MA MUUQATO !!! waana inaan ku celiyo tifaftirka, koobiga iyo dhejiska. EYE Waan saxaa oo waan nuquliyaa si aanan ugu wicin wsap laakiin khadka taleefanka ayaan ugu wacaa maxaa yeelay tayada wicitaanadu way ka fiican tahay, qorshahayguna waa mid aan xad lahayn. Tilmaamo kiiskan kama helo.
Game of Thrones Ascent hadda waa iPhone waana bilaash